CEC waxay leedahay (7) goobo kambas oo u adeegaya darajooyinka 9-12 ee Aurora, Castle Rock, Colorado Springs, Fort Collins, Inverness (Englewood), Parker, iyo Windsor. Kambasyadani waxay bixiyaan diwaan galinta WAQTI BUUXA ee ardayda si ay u kasbadaan Dibloomada Dugsiga Sare oo ay la socoto fursadaha waxbarashada bilaashka ah si ay u gaadhaan Associate Degrees, Shahaadooyinka Shaqada, 60+ Saacadaha Buundooyinka Kulliyada iyo xitaa Shahaadooyinka Bachelor-ka iyada oo loo marayo Wada-hawlgalayaasha Kulliyada La aqoonsan yahay.
CEC waxay kaloo leedahay ikhtiyaarka Kulliyadda Tooska ah ee ardayda fasalka 9-12 oo laga heli karo xerada Inverness iyo Xafiiska Satellite-ka Westminster. Kulliyadda Tooska ah waxay ardayda siisaa diiwaangelin FULL-TIME ah si ay si toos ah uga qaybgalaan fasallada xerada mid ka mid ah Shuraakadayada Kuleejka La Aqoonsaday oo ay awood u leeyihiin inay kasbadaan Shahaadada Isku-xidhka, Shahaadooyinka Xirfadda ama 60+ Saacadaha Dhibcaha Kulliyadda iyagoo isla mar dhammaynaya Shuruudaha Qalin-jabinta Dugsiga Sare ee CEC.
CEC hadda waxay siisaa barnaamij wax barasho toos ah oo khadka tooska ah oo loogu talagalay ardayda fasalada 6-12 oo leh ikhtiyaarka diiwaangelinta WAQTI-FULL iyo PART-TIME oo diyaar ah.*
Fadlan Ogow: Haddii aad xiisaynayso is-diiwaangelinta sannad dugsiyeedka 2021-2022, waxaad buuxin kartaa Codsiga Diiwaangelinta 2021-2022 waxaana la xidhiidhi doona Wakiil CEC si uu ugala hadlo wixii ikhtiyaar ah ee jira. Helitaanka xerada aad dooratay ama barnaamijka ayaa go'aamin doona haddii diiwaangelinta ay suurtagal tahay. *